Ahoana no fomba fampiasantsika (mifanohitra aminao) amin'ny haino aman-jery sosialy? | Martech Zone
Ahoana no fomba fampiasantsika (mifanohitra aminao) amin'ny haino aman-jery sosialy?
Zoma, Desambra 6, 2013 Douglas Karr
Tsy azoko antoka hoe rahoviana hafanana namolavola ity inforgraphic ity, saingy tsara be raha nilaiko nizara izany. Ny antony maha-tsara azy dia satria fijery marina sy fampitahana azy io ny fomba ampiasain'ny matihanina amin'ny marketing amin'ny media sosialy mifanohitra amin'ny salan'isa, olona tsy marketing. Tsy mino aho fa ampy ny mpitarika ato amin'ity indostria ity manome sary marina momba ny fampiasana media sosialy. Ny maro amin'izy ireo dia mampatsiahy ahy ny mahazoa mpiandry volo haingana avy teo.
Tokony hamerina amin'ny laoniny ny andrasana amin'ny mpanjifa rehetra isika momba ny ho toa ny fampiasan'izy ireo sy ny fanarahana azy ao amin'ny media sosialy. Raha tsy manana ekipa kintana rock izy ireo isaky ny hetsika ary mamoaka atiny sarobidy tsy misy fijanonana, dia tsy hanana vokatra mitovy amin'ny olona toa antsika izay manao izany fivelomana izany. Angamba izany no antony namerenan'ny marketing marketing ny satro-boninahitra amin'ny hetsika marketing ataon'ireo orinasa sy olon-tokana - miaraka amin'ny media sosialy manome fampiroboroboana lehibe.
Tags: FacebookGoogle +hafananamasoivoho hafananaInstagramLinkedInvarotra mifanohitra amin'ny mahazatraPinterestfampiasana media sosialyspotifyTumblrTwittermampiasa media sosialymifampitaha amin'ny
Araka ny efa voalaza mialoha, nandeha tany Mobile ny varotra fialantsasatra 2013
Hevitra Fifaninanana fialan-tsasatra Facebook mahafinaritra